Kedu ihe bụ VPN? Olee Otú I Si Ahọrọ Otu? | Martech Zone
Ruo ọtụtụ afọ, echere m na ịnwe ọfịs bụ ezigbo ego… ọ nyere ndị ahịa m n'echiche na azụmaahịa m kwụsiri ike ma na-aga nke ọma, ọ nyere ndị ọrụ m na ndị ọrụ ngo ebe dị n'etiti, ọ bụkwa isi iyi nke m.
Nke bụ eziokwu bụ na ndị ahịa m agaraghị n'ọfịs na, ka m na-agbada ndepụta ndị ahịa m ma na-emewanyewanye nke ọ bụla, ana m anọkwu ebe ọzọ na ụlọ ọrụ m nọ ọdụ efu oge. Nke ahụ bụ ihe dị oke ọnụ space ụlọ ọrụ dị oke ọnụ karịa ego.
M na-arụzi ọrụ n’ụlọ ọrụ ndị na-arụkọ ọrụ, ọdụ ụgbọelu, họtel, ebe a na-ere kọfị, na ebe m na-edere ndị ahịa m ozi. Otu n'ime ndị ahịa m nyere m ọdụ m ka m rụọ ọrụ na ya.
Ọ bụ ezie na ndị ahịa m na-ejikwa netwọkụ dị mma emechi nke ọha na eze, nke ahụ abụghị otu ihe na saịtị ndị na-arụ ọrụ na ụlọ ahịa kọfị. Eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime netwọkụ ndị ahụ na-emekọrịta ihe nke ọma. Site na nzere na ihe ọgụgụ isi m na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, enweghị m ike itinye ndụ m na nkwukọrịta na-emeghe ọhaneze. Nke ahụ bụ ebe Izu nzuzo n'onwe Ntanetị abata n’egwuregwu.
Gịnị bụ a Okwey?
A Okwey, ma ọ bụ netwọk nkeonwe nzuzo, bụ oghere dị nchebe n'etiti ngwaọrụ gị na ịntanetị. A na-eji VPN iji chebe okporo ụzọ gị n'ịntanetị site na snooping, nnyonye anya, na ime nnyocha. VPNs nwekwara ike rụọ ọrụ dị ka onye nnọchiteanya, na-enye gị ohere ikpuchi ma ọ bụ gbanwee ọnọdụ gị ma sọfụ web na-enweghị aha site na ebe ọ bụla ịchọrọ.
Isi Iyi: ExpressVPN
Maka nkọwa zuru ezu banyere ihe VPN bụ, ị nwekwara ike ịchọ ịlele ihe mmụta mmekọrịta nke Surfshark, Kedu ihe bụ VPN?
Ntak Jiri VPN?
Site n'ịhụ na nkwukọrịta ịntanetị gị niile ezoro ezo ma jikọta ya na ebe ndị ọzọ, enwere ọtụtụ uru iji tinye a Network Nkeonwe Ndị Ime Onwe:
Zoo IP gị na ebe gị - Jiri VPN zoo adreesị IP gị na ebe ị na-aga site na saịtị na ndị na-agba ọsọ.
Zoo njikọ gị - Ezi VPN na-eji ihe nzuzo 256-bit siri ike iji kpuchido data gị. Chọgharịa site na Wi-Fi na-ekpo ọkụ dị ka ọdụ ụgbọelu na cafes maara okwuntughe gị, ozi ịntanetị, foto, data akụ na ozi ndị ọzọ nwere mmetụta enweghị ike ịbanye.
Lelee ọdịnaya site na ebe ọ bụla - Iyi niile gị na-egosi na ihe nkiri na-enwusi-ngwa ngwa HD na ngwaọrụ ọ bụla. Anyị arụgogo netwọkụ anyị iji nye oke ọsọ na enweghị njedebe bandwidth. Download ihe ọ bụla na sekọnd, na nkata vidiyo na obere nchekwa.
Mepee ebe nrụọrụ weebụ enyocha - Mfe ịkpọghee saịtị na ọrụ dị ka Facebook, Twitter, Skype, Youtube, na Gmail. Nweta ihe ị chọrọ, ọbụlagodi na a gwara gị na ọ dịghị na obodo gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nọ na ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-achịkwa ohere.
Enweghị onyunyo - Kwụsị snooping site gọọmentị, netwọk nchịkwa, na gị ISP.
Enweghị atụmatụ ezubere iche - Site na izochi adreesị IP na ọnọdụ gị, ExpressVPN na-eme ka o siere saịtị na ọrụ ike ịkwụ ụgwọ dị elu ma ọ bụ gosipụta mgbasa ozi ezubere iche dabere na ọnọdụ. Zere itinye ego n'ụgwọ maka ezumike ma ọ bụ usoro ịntanetị.
N'ihi na VPN na-ezo adreesị IP m na ọnọdụ ya, ọ na-enyekwa m nnukwu ụzọ iji nwalee saịtị ndị ahịa m iji hụ na ndị ọbịa na-amaghị aha na-enweta ahụmịhe onye ọrụ kwesịrị ekwesị.
Esi họrọ VPN
Ọ bụghị ọrụ Virtual Private Network niile ka hapụtara. Enwere ọtụtụ ihe kpatara ịhọrọ onye ọzọ. Na narị otu narị ndị ọrụ dị iche iche, na-agụ a Tunnelbear nyochaa na ịhọrọ nke ziri ezi pụtara ịnweta nguzozi ziri ezi n'etiti ọrụ, ịdị mfe nke iji na ịnye ọnụahịa.
Ọnọdụ Geographic - Mgbe ị jiri VPN nweta Internetntanetị, ngwugwu data niile na-abịa site na ihe nkesa dị na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka ga-agafe na sava nke onye na-eweta gị VPN. Maka ịrụ ọrụ kachasị, họpụta VPN maka PC yana sava gburugburu ụwa. N'ezie, nkwa VPN banyere iru zuru ụwa ọnụ anaghị ekwe nkwa arụmọrụ dị mma, mana ọ bụ ihe ịrịba ama dị mkpa na akụrụngwa onye na-eweta ọrụ dị elu ma nwee ike ịnye ọrụ dị elu.
bandwit - Imirikiti azụmaahịa na-enye VPN dị n'ime ya. Ọ bụrụ na ha nwere ọtụtụ bandwit, nke ahụ dị mma. Agbanyeghị, ịrụ ọrụ na VPN nke na-enweghị ikike ga-eme ka onye ọ bụla jikọọ na ya wee pụọ.
Nkwado ekwentị - Nhazi VPN na-abụbu ihe mgbu, mana sistemụ arụmọrụ nke oge a ejirila ike VPN rụọ ọrụ. Jide n'aka na ị na-arụ ọrụ ọrụ VPN nwere ma desktọọpụ ma ike mobile.
confidentiality - Ikwesiri ịma nke ọma mgbe niile na onye na-eweta ọrụ gị anaghị anakọta ma ọ bụ kesaa ozi nkeonwe gị ma ọ bụghị nyochaa ọrụ gị. Buru n'uche na nkwa nke izu oke na akwụkwọ akụkọ efu apụtaghị na ọ ga-eme. N'ime afọ ole na ole gara aga, enwere ọtụtụ ihere na ntanetị. Ọ bụ ihe amamihe dị na ịhọrọ VPN maka PC site na onye na-eweta ọrụ na-anọghị na Europe ma ọ bụ America.
Speed - Top VPNs na-echebe nzuzo gị, mana na-enye gị ohere ịga n'ihu na-eme ihe masịrị gị n'ịntanetị, gụnyere ikiri vidiyo dị elu, igwu egwuregwu ịntanetị, ịchọgharị na weebụ, na ịmụtakwu ihe teknụzụ rụzuru. Ekwenyeghi na mgbasa ozi. Na-enyocha nyocha mgbe niile n'ịntanetị ma mee nyocha nke gị. Mgbe ị na-anwale ọsọ ọsọ ọsọ VPN maka kọmputa, mee ọtụtụ ule n'oge dị iche iche n'ụbọchị.
price - mustkwesịrị ịdị njikere itinye ego iji jiri VPN kacha mma. Ọrụ n'efu nwere ike ịdị mma maka iji otu oge, mana ha na-ahapụ ọtụtụ ihe a ga-achọ ma ọ bụrụ na ejiri ha kwa ụbọchị. Free VPN maka Windows na Mac kọmputa na-enwekarị okporo ụzọ ma ọ bụ oke ọsọ. Ozi ọma ahụ bụ na ọtụtụ ndị na-enye VPN maka PC na-enye gị ohere ịnwale ọrụ ahụ, nyochaa arụmọrụ ya, ọ bụrụ na ihe agahie, ị ga-enweta nkwụghachi.
Ndị ahịa 'na nyocha ndị ọkachamara nwere ike ịba uru mgbe ị na-ahọrọ n'etiti ọtụtụ onyinye yiri ya. Offọdụ n'ime ihe ndị kachasị mkpa na-ekpebi ma ọrụ VPN dị mma ma ọ bụ nke ọjọọ ka ọ pụtara naanị mgbe izu ole na ole jiri ya. Chọọ maka uru na ọghọm ma dị oke egwu. Enweghị ọrụ 100% zuru oke, mana ị ka ga-ahọrọ nke kachasị kwesịrị ekwesị n'ihi na VPNs bụ ọdịnihu teknụzụ.
Ahọrọ m ExpressVPN n'ihi na ọ nwere ebe ntanetị 160 gafere mba 94, jiri nhichapụ 256-bit, nwere ngwa na-ebuli ọnọdụ gị, ma nwee ọnụahịa na nkwado dị ukwuu. Ozugbo m mepere Mac ma ọ bụ jikọọ na netwọk na iPhone m, m na-ahụ VPN jikọọ na m na-elu ma na-agba ọsọ! Ekwesighi m ime ihe ọ bụla iji hazie ma ọ bụ jikọọ n'oge ọ bụla… ọ bụ akpaghị aka.
Nweta ụbọchị 30 n'efu na ExpressVPN
Ngosipụta: Enwetara m 30 ụbọchị na-enweghị ExpressVPN maka onye ọ bụla na-edebanye aha.
Tags: ExpressVPNsọfụfụỌwaranetwọk nkeonwe nzuzoOkweyiheihe bụ vpn
Okwu Iwu Nke Top na Blogging